KuBalawuli beSigcawu-Abalawuli badlalwe ngaphambi kokuba babulele uStan Lee - Inkcubeko Yopopu
I-Spider-Man: KuBalawuli beSigcawu-Abadlali badlalwe ngaphambi kokuba babulele uStan Lee
Abalawuli be Indoda yesigcawu: Kwivesi yesigcawu badlalwe ngexesha le-Oscars phezolo ngaphambi kokuba babulele abenzi beSpider-Man emva kwexesha uStan Lee noSteve Ditko. Bephethe imifanekiso eqingqiweyo yoPhiliso oluPhambili esandleni, iqela labalawuli liyigqibile intetho yabo kwigumbi lodliwanondlebe, bathatha ixesha ukongeza umbulelo wabo ngeentsomi zeMarvel.
Besisazokubulela uStan Lee noSteve Ditko ngokusikhuthaza ngayo yonke le nto kwaye sibe namandla okukholelwa ukuba sonke, singabantu, sinamandla, amandla okuba ngamagorha, utshilo umlawuli uBob Persichetti emva komhla wabo- intetho yeqonga, nganye Indiewire .
U-Persichetti uqhubeke wathi umoya webhanyabhanya uvela ngqo ku-Lee no-Ditko.
'UPhil noChris badibanise unyango kwaye bahlela ingxelo ebingumceli mngeni-imovie eyacel' umngeni abaphulaphuli ukuba bakholelwe kubo kwaye bakholelwe kummelwane wabo kwaye babe nethemba kwaye benze umahluko kwihlabathi, utshilo. Yiba ngumcebisi, ube ligorha. Yayiyiyo leyo. Oko kuvela kuStan Lee kunye noSteve Ditko.
Ngelixa iziphumo zilula kwaye zimnandi, abalawuli babesazi ukuba bathatha into ebalulekileyo ngebali likaMiles Morales. Umququzeleli-mlawuli uPeter Ramsey, owokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuphumelela ibhaso, wathi bagcina abantwana abaza kujonga uMiles engqondweni kuyo yonke ifilimu.
'Sonke sikuvile ngokunzulu ukubaluleka koku, uthe . I-Miles yayinezinto ezininzi ezixhaswayo-sasiyazi ukuba kubaluleke kangakanani kwaye kuya kubonisa abantwana ukuba babe ngabona bahle kunabo kungakhathaliseki ukuba bangobani.
Nabani na onokugqoka imaski; Wonke umntu unamandla kwaye wonke umntu uyimfuneko, kwaye ngumoya womboniso bhanyabhanya.
Indoda yesigcawu: Kwivesi yesigcawu imiselwe ukuba ifike kwi-4K Ultra HD Combo Pack kunye neBlu-ray Combo Pack ngalo Lwesibini (Feb. 26); Inguqulelo yeDVD iya kufumaneka ngoMatshi 19.
ingcuka yolutsha ibuya nini kwi-netflix
Ukufa ngokulula ngeresiphi yekhekhelethi
ndadibana kanjani nonyoko netflix ukuhamba
ukukhwela zokudlala kwi zokudlala r us
Umlingisi u-amanda uyindoda